Xasan sheekh oo sheegay in Mukhtaar Roobow la afduubtay – Radio Daljir
Xasan sheekh oo sheegay in Mukhtaar Roobow la afduubtay
Juunyo 17, 2021 9:31 b 0
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku tilmaamay xarriga Mukhtaar Roobow mid afduub ah oo sharci darro ah isla markaana u xiran arrimo siyaasadeed.
Xasan Sheekh Maxamuud oo wax laga weydiyay xiritaanka Mukhtaar Roobow, xilli uu ka qeybgalayay barnaamij ka socday barta Twitter Space ayaa sheegay in sidii loola tacaalay Mukhtar aanay sax aheyn.
“Waa la afduubtay, waxaan ku tilmaami karaa qof la soo afduubtay oo u xiran arrimo siyaasadeed umana xirno arrin amni.”
“Dowladda Waxay gebi ahaanba xirtay in Shabaab ay hoggaamiyeyaal kale ka yimaadaan. Arrinta xiridda Mukhtaar illaa iyo maanta waxay albaabka ka soo ooday dad muhiim ah oo hoggaamiyeyaal ah in Shabaabka ay dib uga soo noqdaan”.
Somaliland & Taiwan oo heshiis kala saxiixday